Iivenkile zakwa-Apple ziya kunxiba oluhlaza ngoMhla woMhlaba | Ndisuka mac
U-Apple ubonakalisa unyaka nonyaka ukuzibophelela kwakhe kwindalo esingqongileyo, engasebenzisi nje amandla ahlaziyekayo kuninzi lwezixhobo kunye neefektri apho izixhobo zakhe zihlanganisene khona, kodwa ufuna ukwazisa abantu ngokusetyenziswa kolu hlobo lwamandla phakathi kwabemi. Omnye unyaka, kwaye njengoko uMhla woMhlaba usondela, abasebenzi beeVenkile zeApple Bayakutshintsha ihempe yabo eluhlaza okwesibhakabhaka bayenze eluhlaza. Kodwa ayizukuba kuphela kotshintsho kubugcisa eziya kubonelelwa ziivenkile zenkampani kwihlabathi liphela, kodwa ilogo efanayo iya kufakwa umbala oluhlaza.
NgeCawe ezayo, nge-22 ka-Epreli, kubhiyozelwa uSuku loMhlaba, kodwa kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo, abasebenzi bevenkile yakwa-Apple bazakuqala ukunxiba izikipa eziluhlaza. Ukongeza, ukusukela nge-20 ka-Epreli, igqabi leapile liya kutshintsha lisuka kumhlophe lisiya eluhlaza. U-Apple usebenzisa olu suku ukuqaqambisa iinzame ezenziwe yile nkampani malunga noku kwaye uziqinisekisile ngokubhengeza iiprojekthi zayo ezizayo malunga noku. Ngokwedatha yamva nje ebonelelwe nguLisa Jackson, usekela-mongameli wendalo kunye nomgaqo-nkqubo wezentlalo, i-96% yamandla asetyenziswa yi-Apple kwihlabathi liphela ivela kwimithombo enokuhlaziywa.
U-Apple ubonakalisile kule minyaka idlulileyo ukuba ukuzibophelela kwakhe kwindalo esingqongileyo ayisiyokwexeshana kwaye ngenxa yoko sinomdla wokubona indlela iGreenpeace ebhengeze ngayo inkampani esekwe eCupertino yeyona nkampani izinzileyo emhlabeni. Ngethamsanqa, kancinci kancinci, zonke ezinye iinkampani ezineMicrosoft, Google, Facebook nezinye zenza utshintsho olufunekayo ukuze zikwazi ukuxhomekeka ngakumbi kumandla ahlaziyekayo, zishiya eminye imithombo yamandla engcolisa amandla, njengamalahle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iivenkile zakwa-Apple ziya kunxiba oluhlaza ngoMhla woMhlaba
Umdlalo wokuqala weStarcraft ngoku ukhululekile ukukhuphela iMac